बिहान उठ्ने बित्तिकै नहेर्नुहोस् यी चीजहरु, नत्र भने दुर्भाग्यले सताउँछ सधैँ Nepalpatra बिहान उठ्ने बित्तिकै नहेर्नुहोस् यी चीजहरु, नत्र भने दुर्भाग्यले सताउँछ सधैँ
बिहान उठ्ने बित्तिकै नहेर्नुहोस् यी चिजहरु, नत्र भने दुर्भाग्यले सताउँछ सधैँ
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार बिहान उठ्ने बित्तिकै केही समयसम्म कुनै पनि अशुभ चिज हेर्नुहुँदैन । नत्र पूरा दिन त्यसको नकारात्मक असर पर्छ । यसबाट तपाईको कामकाज पनि प्रभावित हुन्छ । केही यस्ता चिजहरु छन्, जसलाई बिहान बिहानै हेर्दा दिनभर खर्च र नोक्सान बढ्छ । ती अशुभ चिजको कारणले विवाद र तनावको साथमा दिन बित्छ । साथै यसको विपरीत तपाईको बिहानी शुभ रहेमा पूरा दिन राम्रो बित्छ । जबकी दिनको शुरुवात खराब रहेमा पूरा दिन समस्यामा बिताउनु पर्ने हुनसक्छ । बिहान-बिहान शुभ काम गर्ने र शुभ चिज हेर्ने परम्परा चलिआएको छ । बिहान उठिसकेपछि अशुभ चिज हेर्नबाट बँच्नुपर्दछ । यहाँ जान्नुहोस् कि बिहान कुन-कुन चिज हेर्नु हुँदैन ।
१. ऐना हेर्नुहुँदैन
बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले ऐना हेर्नु अशुभ मानिन्छ । यसकारण वास्तुको अनुसार पनि बेडरूममा ऐना राख्न मनाही गरिन्छ । बिहान ऐना हेर्दा विचारमा नकारात्मकता बढ्न सक्छ । यदि बेड नजिक ऐना लागिरहेको छ भने सुत्नु अघि यसलाई पर्दाले ढाक्नुपर्दछ ।
२. छायाँ हेर्नुहुँदैन
बिहान उठेर छायाँ हेर्नबाट बँच्नुपर्दछ । वास्तवमा आफ्नै या दोस्रो व्यक्तिको छायाँ हेर्दा दुर्भाग्य रहिरहन्छ । छायाँ हेर्दा तनाव, डर र कन्फ्यूजन बढ्छ । जसबाट कामकाज बिग्रिन्छ र यसकारण यसो गर्नुहुँदैन ।
३. जनावर र उनीहरूको फोटो
बिहान उठेर जनावर र उनीहरूको फोटो हेर्नुहुँदैन । यसो गर्नाले दिनभर विवाद र तनाव रहिरहन्छ ।बिहान उठ्ने बित्तिकै शुभ चीज हेर्नुहोस्- बिहान उठ्ने बित्तिकै शुभ चिज हेर्नुपर्दछ । जस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले आफ्नो हात हेर्नुहोस् । देवी-देवताको फोटो या सुन्दर सकारात्मक फोटो हेर्नुपर्दछ ।
ऐना हेरेर आफै गर्नुहोस् आफ्नो भविष्यवाणी
जसपाका एमालेसँग तीन माग, होला त सत्ता साझेदारी ?
ग्रहण लाग्दा के के गर्नुहुँदैन ? ग्रहण लागेको बेला के गर्ने ?
पढ्नुहोस्, विवाहितले धेरै पोर्न भिडियो हेर्दा के हुन्छ ?
विहान उठ्ने वित्तिकै यी ५ चिज देखियो भने हुन्छ दिन नै शुभ